Creative Roar 2, famerenana ity mpandahateny Bluetooth mahafinaritra | Vaovao IPhone
Creative Roar 2, mpandahateny Bluetooth manamafy ny fitarihany
Raha misy zavatra mamaritra ny marika Creative, dia io no làlan-kaleha tsy misy kilema mifamatotra amin'ny tontolon'ny feo. Ny orinasa dia efa teo amin'ity sehatra ity nandritra ny taona maro, sarotra be ny tsy miraharaha ireo mpandahateny Bluetooth toa ilay vao haingana tao amin'ny katalaogin'ny vokatra. Sound Blaster Roar 2.
Ity mpandahateny ity dia lovan'ny taranaka voalohany, a Mpandahateny Bluetooth 10 izay nanala ny maro tamin'ireo marika ambony tamin'ny vokatra mora kokoa nefa feno kokoa ary manana kalitaon'ny feo tsy azo iadian-kevitra. Ny Roar 2 dia tonga manamafy ny toerana misy azy ao anatin'ny lisitry ny mpandahateny Bluetooth tsara indrindra.
1 Sound Blaster Creative Roar 2, fahatsapana voalohany
2 Fifandraisana amin'ny saika ny zava-drehetra
3 Fahaleovan-tena hatramin'ny 8 ora
4 Ho an'iza ny Roar 2?
Sound Blaster Creative Roar 2, fahatsapana voalohany
Rehefa avy manana ny voalohany Rojo mamorona, Tsy azoko natao ny tsy nahazo an'io kinova faharoa amin'ny vokatra.
Mazava ny fitakiana: mitovy kalitaon'ny feo fa 20% kely kokoa ny habeny. Amin'izay dia tsy maintsy ampiarahintsika ny hakanton'ny hatsarana amin'ny haavon'ny endrika famolavolana, fitaovana tsara kokoa ho an'ilay tranga ary ny fifandraisana azo idirana mba hahazoana tombony betsaka amin'izany.
Tokony holazaiko fa tamin'ny voalohany dia toa somary hafahafa ho ahy ny fahaizan'ity Roar 2 ity mitazona ny kalitaon'ny feo mitovy amin'ny maodelin'ny taranaka voalohany taorian'ny fihenan'ny habeny. Tena avo ny fisotroana fa toa nahavita asa be tamin'ny fametrahana vaovao napetrakao tamin'ny mpandahateny, mitahiry toerana malalaka ao anatin'ilay raharaha.
Rehefa avy nampifandray ny iPhone tamin'ny alàlan'ny Bluetooth tamin'ny Roar 2 aho dia manamarina ilay marika tsara ny endriko gaga. Mandeha tsara ny feon'ilay mpandahateny, na amin'ny habe ambany na amin'ny avo izay ahafahantsika manelingelina ireo mpandahateny dimy ao anatiny.
Hadinoy ny feo tinny omen'ny 90% mpandahateny azo entina eny an-tsena. Ny Roar 2 dia milalao amina ligy hafa ary misakafo kely amin'ny sahaninao rehetra amin'ny fifaninanana mivantana ianao. Ny mpandahateny 2,5-inch izay mamerina ny refy ambany sy afovoany dia mahatonga antsika hieritreritra fa ny Roar 2 dia manana subwoofer ao anatiny, vokany izay ampitomboin'ny taratra radiatera mandeha eo amin'ny sisiny ary ho hitantsika mihetsiketsika amin'ny famokarana ny bas .
Raha toa mbola tsapanay fa ny Creative Roar 2 tsy ampy bas, afaka manatsara azy ireo bebe kokoa amin'ny Maody TeraBass Izy io dia ampandehanan'ny bokotra iray ao ambadiky ny mpandahateny.
Raha ny amin'ny feon'ny treble dia miavaka noho izany ny Roar 2 feo madio sy madio. Averiko indray fa mpandahateny mahay mitondra kalitao ity, ka tsy maintsy hadinontsika ireo haavo avo sy mahasosotra ianjadian'ny vokatra ambany, ao amin'ny mpandahateny Creative dia afaka mankafy ny karazana mozika ankafizintsika isika miaraka amin'ireo sivy rehetra, na dia amin'ny volabe aza.
Fifandraisana amin'ny saika ny zava-drehetra
Raha toa ka tsy ampy ho anao ny manana fifandraisana Bluetooth dia ity ny lisitry ny rehetra fifandraisana atolotry ny Roar 2:
Fandraisana anjara (jack 3,5 mm)
USB (raha mampifandray ny findainao ianao
Ho an'ny antitra, afaka manao izany isika ampiasao ho mpitam-boky na tsy misy tanana raha toa ka nampifanaraka ny finday.
Ny mpampiasa sasany dia manina ny fisian'ny IRDA sy ny fanaraha-maso lavitra hifehezana lafiny sasany amin'ny playback raha tsy mandeha amin'ny mpandahateny. Fanampiny izay tsy maharary na oviana na oviana fa raha ny amiko dia tsy heveriko ho fanampiana ilaina izany satria mampiasa fifandraisana Bluetooth, mampiasa ny iPhone ho an'ity tanjona ity aho.
Fahaleovan-tena hatramin'ny 8 ora
Ny batterie 6.000 mAh ao amin'ny Creative Roar 2 dia manome fahaleovan-tena hatramin'ny 8 ora, tarehimarika iray izay afaka miovaova be arakaraka ny habetsahana sy ny fifandraisana ampiasaintsika amin'ny fitendrena mozika.
Mba hijerena ny fahaleovan-tenan'ny mpandahateny dia afaka mampiasa ny mari-pamantarana fiampangana izay hita amin'ny iPhone eo akaikin'ny marika Bluetooth isika na raha irintsika, ny Roar 2 dia manana tontonana manjelanjelatra misy LED telo ary izany dia maneho ny fanjakana iadidiana.
Rehefa miala ny bateria, ny Roar 2 dia mampihena ny habetsaky ny be indrindra mba hanitarana ny fizakantena bebe kokoa.
Ary farany, rehefa tsy maintsy mavesatra azy isika dia afaka mampiasa ny adapter herinaratra natsangana na ampiasao ny fifandraisana microUSB. Ny fomba haingana indrindra dia ny charger ary mbola haharitra adiny roa sy sasany vao vita ny tsingerin'ny famahana, fotoana iray izay mitombo be raha mampiasa ny fifandraisana USB isika.
Ho an'iza ny Roar 2?
Manoro hevitra an'ity mikabary ity ho an'izay mitady a Fanamafisam-peo Bluetooth saingy manana kalitaon'ny feo mampitsiriritra, izay tena mahatonga anao hankafy ny mozika lalaovinao ao.
Ekipa izany milanja 1 Kg ary ny refy, na dia tena tery aza, dia aza atao mpandahateny afaka entinao miaraka aminao na aiza na aiza. Natao hapetraka ambonin'ny sehatra izy io ary avela eo rehefa mihaino mozika ianao.
Fantatro ity zavatra farany nolazaiko ity ity dia toa hafahafa saingy isaky ny mahita olona maro eny an-dalambe miaraka amin'ireo mpandahateny Bluetooth mitaingina ny azy aho fiderana faran'izay tsara Ary marina, ny Roar 2 dia tsy natao ho an'izany. Azo ampiasaina amin'ny aforaha tsy misy olana fa araka ny nolazaiko dia mora ny mamela azy amin'ny toerana voafaritra ho fampiononana anay ary ho an'ny mpandahateny mba hahazoany tombony indrindra, fa tsy hanohintohina ny fahamendrehany sy ny an'ny radiator pasif eo amin'ny sisiny.
Raha reraky ny tariby ianao, fitaovana 2.1 be dia be izay tsy araraotinao satria manelingelina ny mpiara-monina aminao ianao, tianao ny fifandraisana rehetra sy ny safidy hitondrana azy na aiza na aiza amin'ny fotoana manokana, ny Roar 2 no mpandahateny anao.
El Creative Sound Blaster Roar 2 dia mpandahateny 10 amin'ny lafiny rehetra. Mahafinaritra ny kalitaon'ny feo, avo ny fizakan-tenany noho ny hery natolotry ny mpandahateny azy, milamina sy kanto ny endrika nefa koa, ny fifandraisany afaka mamela azy hampiasaina amin'ny fitaovana maro. Afaka mangataka bebe kokoa ve ianao?
Mazava ho azy fa izany rehetra izany dia mahatonga ny Roar 2 tsy vokatra ara-toekarena na dia ao anatin'ny faritra misy azy aza iray amin'ireo mpifaninana indrindra amin'ny resaka sandan'ny vola. Raha miloka amin'ity mpandahateny ity ianao dia mila manova ny puce ary mieritreritra mpandahateny azo entina amin'ny fomba hafa noho ny mahazatra anao.
Mamolavola sy manangana kalitao
Ny mpampiasa sasany dia mety tsy hahita fanaraha-maso lavitra
Miaraka amin'ny Bluetooth, heno ny ivoany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Creative Roar 2, mpandahateny Bluetooth manamafy ny fitarihany
Apple dia nandà tsy hanome ny kaody loharano an'ny iOS ho any Sina
Ny programa Apple Renew dia mandrisika ny mpanjifany amin'ny karatra fanomezana